10 Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 13/11/2020)
Ukuba uceba uhambo lwakho lokuqala eYurophu, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uyazi malunga kakhulu imizi amahle emhlabeni. siyile isikhokelo esifanelekileyo 10 Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu. Uhambo oluya kwilizwe leenqaba, ukutya okumnandi, iipaki zesizwe, yaye iilali ezintle, unokuba lolunye lweeholide ezingalibalekiyo oya kuba nalo. Okuphikisanayo, Inokujika ibe yintsomi engendawo kwaye ibe nesiphelo esibi, ukuba awuzilungiselelanga ngokufanelekileyo.
Nokuba uhamba i-Europe okokuqala okanye uyabuya, ezi ngcebiso ziya kwenza uhambo lwakho lukhuseleke, Eyona nto ikhululekile, kwaye ngokuqinisekileyo yindumasi.
1. Ukutyelela iidolophu ezincinci kunye neeNdawo eziKhokelwayo
Ukuba luhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, ngokuqinisekileyo uya kwiindawo wonke umntu athetha ngazo. kunjalo, ukuba ufuna ukufumanisa iYurophu ekhethekileyo, then not visiting small villages and known cities are one of the travel mistakes to avoid in Europe. You should plan your trip to the most unforgettable off the beaten path places in Europe.
Kanjalo, ukuba ufuna ukubona kwaye unemifanekiso efanayo nezinye izigidi zabakhenkethi abagcwele ezitratweni zaseParis, milan, nasePrague, emva koko landela izihlwele. kodwa, ukuba unomphefumlo womphandi, kwaye ujonge loo matye afihliweyo, ke cwangcisa uhambo lwakho iidolophana ezincinci nezizodwa eYurophu.
UFlorence waya eMilan Amaxabiso oLoliwe
UFlorence waya eVenice amaXabiso oLoliwe
EMilan ukuya eFlorence amaXabiso oLoliwe
IVenice ukuya eMilan Amaxabiso oLoliwe
2. Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu: Ukungasebenzisi izithuthi zikawonke-wonke
Enye yezinto zokuqala eziza engqondweni xa usiva Ukuhanjiwa kawonke-wonke, kuxinene kwaye kushushu iibhasi, imigca, kunye nokugcwala. kunjalo, Izithuthi zikawonke-wonke eYurophu ayizizo iibhasi kuphela kodwa ziitram kunye noololiwe. Abanye abakhenkethi bakhetha ukuqesha imoto, emva koko uhambe, kodwa izithuthi zikawonkewonke eYurophu zikhululekile kakhulu, ukufika ngexesha, cheap, kwaye yacetyiswa.
Unokufikelela ngokulula kwezona ndawo zikude zeYurophu, Ugcino lwendalo olumangalisayo, iinqaba, yaye breathtaking iimboniselo, ngololiwe. Akukho ndlela engcono yokuhamba ngeenxa zonke ngeYurophu ngololiwe, lixesha eligcweleyo kunye nokugcina imali.
IVienna ukuya kumaXabiso oLoliwe eSalzburg
IGraz ukuya eSalzburg Amaxabiso oololiwe
I-Linz ukuya kumaxabiso eSitimela saseSalzburg
3. Ukungafumani i-Inshurensi yokuHamba
Ewe, imizi yaseYurophu sesinye sezixeko eziphucukileyo nezikhuselekileyo emhlabeni. kodwa, usengumntu, kwaye amawa kwiipaki zikazwelonke zaseYurophu amqengqelezi engenanceba. Ngelixa unokuba ngowona mntu unamava kubahambi kwaye ungumhambi, usengabanjwa yingqele, ukujija iqatha, okanye ibiwe ikhamera yakho.
I-inshurensi yokuhamba eYurophu ibalulekile kwimpilo nakwezinye izizathu zokuhamba. Ukufumana i-inshurensi yokuhamba eYurophu kufuneka, Kwaye akufuneki ugcine kwimfuneko enjalo. Ukungafumani i-inshurensi yokuhamba yimpazamo ekufuneka uyiphephe xa usiya eYurophu kuba inokukuhlawulisa imali eninzi.
EMarseilles ukuya eLyon Amaxabiso oLoliwe
Amaxabiso eParis ukuya eLyon
Amaxabiso eLyon ukuya eParis amaxabiso
ILyon ukuya kwiAvignon Amaxabiso oQeqesho
4. Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu: Ukungathengi amatikiti kwangaphambili
IYurophu iyabiza. Nokuba uhambela kwezona ndawo zifikelelekayo, iimyuziyam kunye namatikiti okutsala aya kukubiza imali encinci. Ukungathengi amatikiti kwangaphambili yenye yezona mpazamo zinkulu ukuthintela iYurophu, izigidi zabakhenkethi abatyelela iYurophu minyaka le, izokuqinisekisa ukuba.
ke, Unokufumana izivumelwano ezinkulu kwiindawo ze-iconic zaseYurophu, iindawo ezinika umdla zotyelelo, kunye nemisebenzi, ukuba wenza uphando kwaye ubhukisha kwangaphambili. Ngamanye amaxesha unokufumana izivumelwano ezintle ngokulula ukuthenga amatikiti kwi-intanethi, kwaye konga ixesha elininzi kakhulu elixabisekileyo kuhambo lwakho. Ukwengeza, ukuba luhambo lwakho lokuqala oluya eYurophu, Kuya kufuneka ulungele imigca emide. ke, ukuthenga amatikiti okuhamba nawokutsala kwi-intanethi kuya kukuhlangula kukuma kwimvula egalelayo, kushushu iintsuku zehlobo, kwaye likushiya ixesha lolo uluvo nepikniki.
5. Ukutshintshiselana ngemali kwisikhululo seenqwelomoya
Ukuya kwilizwe langaphandle kunokuba noxinzelelo, ungathethi ulwimi okanye ufumane indlela ejikeleze isixeko. Ukujongana nohlahlo-lwabiwo mali kunye nemali yamanye amazwe nako kunokuba luxinzelelo. Ngelixa ukutshintshiselana ngemali kwisikhululo seenqwelomoya kulungile kwaye kuthembekile, yenye yeempazamo zokuhamba ukunqanda eYurophu.
Imirhumo uya kuthi hlawula kwaye utshintshe imali iyakubiza, ke kungcono wenze uphando lwakho kwi-intanethi ku-eamanqaku atshintshanayo. kwakhona, ungasoloko ubuza kulwamkelo lwakho lwehotele, bayakonwabela ukucebisa iingongoma zemali ethembekileyo kwindawo. Kuyacetyiswa ukuba utshintshe ngokwaneleyo uhambo olusuka kwisikhululo seenqwelomoya, kunye nemali eya kugubungela eyokuqala 1-2 iintsuku kuhambo lwakho.
6. Ukubhukisha indawo yokuhlala kubumelwane obungalunganga
Indawo yenye yezona zinto zibalulekileyo ekudaleni iholide efanelekileyo eYurophu. Ungenzi uphando lwakho kwindawo efanelekileyo yedolophu, Ebumelwaneni, okanye ilali onokuhlala kuyo, yimpazamo ukuyiphepha xa usiya eYurophu. Ukukhetha indawo yokuhlala kubalulekile njengokukhetha uhlobo lwendawo yokuhlala. Ukuhlala kwindawo engeyiyo edolophini kungakubiza ngexesha lokuhamba, traffic, inani, kunye nokhuseleko.
7. Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu: Ukutya kwindawo yokutyela yokuqala oyibonayo
Ukuba ungumkhenkethi oqhelekileyo, emva koko uza kuya kukutya okukhawulezayo okutya okukhawulezayo okanye kwindawo yokutyela yokuqala xa usendleleni. kunjalo, ungaphuthelwa kukutya okumangalisayo, nge izitya zasekuhlaleni ezimnandi kunye neembono eziza kususa umphefumlo wakho.
Ukuba uchitha ixesha elithile uphanda ngaphambi kohambo lwakho, uya kuzinyanga ngamava angenakulibaleka okupheka. ngaphandle, ukuba ukuzama ukutya okumnandi, ungagcina ii-dimes ezimbalwa, endaweni yokutyibilika kwindawo yokutyela yokuqala ngeenxa zonke. Ikofu entle, khekhe, ukutya kwasekuhlaleni, kunye nezitya ezithandekayo ngamaxabiso ahlekisayo, unokuba kufutshane nekona.
8. Ukuncamathisela Kwincwadi Yesikhokelo Endaweni Yokuhamba Kokhenketho Lwesixeko Sasimahla
Incwadi yesikhokelo ingumthombo omkhulu wokhuthazo kuhambo oluya eYurophu, kunye nokuba nesicwangciso sokuhamba ngokubanzi. kunjalo, ukunamathela kwincwadi yakho yesikhokelo yenye yezona mpazamo zinkulu zokuhamba ukunqanda eYurophu. Kuthetha ukuba uza kundwendwela iindawo ezifanayo nezigidi zabanye abakhenkethi, nanjengomkhenkethi.
Ukufumanisa isixeko kwi ukhenketho lokuhamba simahla yeyona ndlela ifanelekileyo ukonwabela izixeko kakhulu eYurophu. Isikhokelo esithetha isiNgesi sasekuhlaleni siya kukusa esixekweni. Ukongeza ekuboniseni iisayithi ezidumileyo nezaziwayo, Isixeko esihamba ngesikhokelo sokhenketho siya kukuxelela iimfihlo zesixeko ezigcinwe kakuhle kwaye sikunike imithwalo yezindululo kunye neengcebiso zesixeko. Oku kubandakanya iingcebiso ngokutya, izivumelwano ezinkulu, amabala afihliweyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu ukuba uhlala ukhuselekile.
9. Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu: Ayipakishelwa iYurophu
Ilanga, lwemvula, kubanda, okanye kufumile, Enye yezona zinto zikhethekileyo ngeYurophu kukuba unganamava onke 4 amaxesha ngosuku. ke, ukungapakishi ngokukodwa imozulu yaseYurophu yimpazamo yokuhamba ukunqanda ngazo zonke iindleko.
Izikipa, ibhatyi yemvula nomoya, izihlangu ezikhululekileyo ziyimfuneko ebalulekileyo yokupakisha kuhambo lwakho oluya eYurophu. Kungcono ukupakisha kunye nokunxiba iileya, Ngale ndlela uya kukhululeka nakweyiphi na imozulu, kwaye ngekhe uthwale ikhabethe yonke.
10. Ukugcina imali yakho kwindawo enye
Izixeko zaseYurophu ziyaziwa ngokuba mihle, kodwa kunye Ukuqokelela, imigibe yabakhenkethi, kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhohlisa abakhenkethi. Ukuntywila kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho lokuhamba phakathi uhambo lwakho losuku ibhegi, ekhuselekileyo, kunye nekhadi letyala yeyona ndlela yokuhamba ngokukhuselekileyo kwaye wonwabele.
Kungcono ukuhlala kwicala elikhuselekileyo kwaye uphephe ukugcina imali yakho kunye nekhadi letyala kwindawo enye. ke, ukuba nezinto zakho ezixabisekileyo kuwe ngamaxesha onke nakwiindawo zonke, yimpazamo yokuhamba ekufuneka uyiphephe eYurophu.
Ukushwankathela, zininzi iindawo ezintle zokufumanisa eYurophu. Unokuchitha impelaveki emangalisayo okanye ucwangcise uhambo olude lwe-Euro, amathuba anokuphela. kodwa, xa usiya kwilizwe langaphandle, imigaqo yomdlalo iyahluka ngokweedolophu. Ekuphela kwento ehlala injalo ziimpazamo zabakhenkethi abazenzayo kuhambo ngalunye. Wethu 10 iimpazamo zokuhamba ukunqanda eYurophu, izokugcina ukhuselekile kwaye wenze uhambo lwakho lukhetheke ngokwenene.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda uceba iholide yakho eYurophu oyithandayo ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iimpazamo zokuhamba ezili-10 ekufuneka uzithintele eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha i / pl iye / tr okanye / de kunye neelwimi ezininzi.